पेट सफा हुँदैन ? यस्तो छ सजिलो उपचार :: a1nepal.com.np
दिसा वा मलमुत्र त्याग राम्ररी भएपछि ज्यान हल्का हुन्छ । सजिलै र राम्ररी मल त्याग हुनु भनेको स्वस्थ्य हुनु पनि हो ।
तर, धेरैको समस्या के हुन्छ भने, दिसा गर्न गाह्रो हुने । बिहान शौच क्रियामा बसेपनि पेट सफा हुँदैन । यसले पेट भद्दा हुने मात्र होइन, रोग पनि निम्त्याउँछ । कब्जियत हुनुको पछाडि यस्तै कारण लुकेका हुन्छन् ।
त्यसैले मल त्याग गरिसकेपछि पेट सफा हुनु जरुरी छ । विशेषज्ञका अनुसार बिहान पेट सफा नहुनुको कारण हाम्रो खानपान र दिनचर्या हो । यदि हामी समयमा स्वस्थकर खाना खान्छौं भने कुनै औषधी नखाई पनि समस्या समाधान हुन सक्छ ।
खाना खाएपछि चकटी ओछ्याएर बसौं । दुवै घुँडालाई मोड्ने र हत्केलाको बलले बस्नुपर्छ । दुवै खुट्टाका औंलाहरु आपसमा मिलेको हुनुपर्छ र कुरकुच्चामा अलिकति दूरी हुनुपर्छ । शरीरको पूरै भार खुट्टामा सार्ने । बज्रासन गर्ने क्रममा कम्मरलाई एकदम सिधा राख्नुपर्छ । यही अवस्थामा दस मिनेट बस्ने र लामो-लामो सास लिनुपर्छ । बज्रासनको दौरान शरीरको मध्यभागमा सबैभन्दा बेसी दवाव पर्छ । यसबाट पेट तथा आन्द्रामा हल्का दबाब पर्छ जसले गर्दा कब्जियतको समस्या हट्छ ।
मास्कमाण्डुबाट काठमाण्डौं बनाउने ‘कडा लालबाबु’को यस्तो योजना स्थानीय सरकारको मनपरी, गाडी भाडाका नाममा ब्रह्मलुट करेला खाने सहि तरिका, यस्ता छन् ८ फाइदा उच्च रक्तचापले मुटु र आँखामा समस्या पार्छ क्याल्सियम किन आवश्यक छ ? जान्नैपर्ने कुरा सास फेर्न गार्हो हुन्छ वा दम छ? यसरी उपचार गर्न सकिन्छ प्युठान जिल्ला अस्पतालमा डिम्बाशयमा हुने जटिल खाले पानीको फोका(DERMATOID CYST) को अप्रेशन दृष्टिविहीन क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियालाई हराएर फर्किदै प्रहरीमा एआइजी र डिआइजीको दरवन्दी थप, भाग्य खुल्यो घर जान लागेका डीआईजीको आफ्नै बाबुवाट बारम्बार बलात्कार , बलात्कारपछि गर्भवती भएपछि भ्रुण हत्या
← क्याल्सियम किन आवश्यक छ ? जान्नैपर्ने कुरा	उच्च रक्तचापले मुटु र आँखामा समस्या पार्छ →